Haweenay Ducayso is Lahayd oo Duullimaad Diyaaradeed Baajisay | Maankaab.com
Haweenay Ducayso is Lahayd oo Duullimaad Diyaaradeed Baajisay
Shanghai (MK/W.Wararka)- Haweenay da’ ah oo safraysay ayaa dib u ridday duullimaad diyaaradeed ka kici lahaa magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha, kadib markii ay matoorka diyaaradda si kama ah ugu tuurtay lacag qadaadiic ah, xilli ay doonaysay inay ducaysato, sida ay xaqiijisay shirkad diyaaradeed oo Shiinaha laga leeyahay.
Haweenaydan oo 80 jir ah ayaa tuurtay qadaadiic sarrif ahaan loogu celiyey, iyada oo sii galaysa diyaarad ay leedahay shirkadda China Southern Airlines oo ka duulaysay magaalada Shanghai.
Booliska ayey u sheegtay haweenayda da’da ah oo aan magaceeda la shaacin in ay si aan kas ahayn u tuurtay lacagta qadaadiicda ah iyadoo ku ducaysanaysa nabadgalyo maalintii Salaasada.
“Sagaal xabbo oo qadaadiic ah ayey tuurtay, balse mid ka mid ah ayaa gashay matoorka, taas oo horseeday in la daad gureeyo rakaabka oo ay afar saacadood hakadaan,” ayey masuuliyiinta shirkaddu warbaahinta u sheegeen.
Qof rakaabka ka mid ah oo arkay haweenayda qadaadiicda tuurtuuraysa, ayaa laamaha ammaanka ee Madaarka Shanghai Pudong International Airport ku wargaliyey dhacdadaas oo la sheegay inay u dhacday Alle-bari dartii.
Saraakiisha ciidammada amniga Madaarka ayaa markaa kadib su’aalo waydiiyay haweenayda oo la safraysay ninkeeda, gabadh ay dhashay iyo wiil ay soddoh u tahay, wax dacwad ah oo lagu soo oogayna ma jirto, halkaas ayaanay socdaalkeeda ka sii wadatay.